Melikey inotengesa yakawanda yezvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko, ayo anonyanya kuve akagadzirwa neakasikwa huni uye chikafu giredhi silicone zvinhu. Izvi zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko zvinonyaradza kurwadziwa kwemwana uye kutsenga kubatsira kubvisa kushushikana uye kushushikana.
Bracelet: Yedu silicone yekuyamwisa teether rundarira yakatsaurirwa kugadzirisa dambudziko remucheche uye mudiki teether, zvinova zviri mufashoni uye zvakachengeteka. Seye rinodonhedza rundarira, rundarira rwedu runogona kudzikisira kurwadziwa kwemeno. Izvo zvinobatsirawo kurerutsa matadza emwana wako anonzwisisa, zvichikubvumidza kunakidzwa nekunyemwerera kwake kwakanaka.
Mhete: Iwo epamusoro-chikamu mazino ekugedza chishongo pendant dhizaini anobatsira mwana kupfuudza akasimba mazino kukuya nguva. Kuvaraidza kukuru kune vacheche pavanenge vachiyamwa. Chengetedza kutarisisa kwemwana wako kure nekukwaya uye bvudzi rakaburitswa paunenge uchiyamwa kana kuyamwisa. Inopa kumanikidzwa kwemanyoro emwana uye kunobatsira kudzikisira kusagadzikana. Inokodzera kuti vanaamai vapfeke uye yakachengeteka kuti vacheche vatsvage. Iyo inozorodza zvikuru uye inozorodza kupfuura mamwe matoyi emolari.
Tamba Gym: Iyi yematanda yemwana mutambo wekurovedza muviri inzira yakanaka yekusimudzira kukura kweyemwana uye inogona kubatsira mwana kukudziridza ruoko-ziso kubatana uye mota hunyanzvi. Mwana wekutenderera akakomberedza toy yekutamba inogadzirwa nemhando yepamusoro yemhando yepamusoro, yakapfava uye yakasununguka kune inobata, zvakapfava zvishongedzo izvo zvinogona kugadzira kukwenya, rustles nemabhero.
Tikugashirei kugadzirisa hunyanzvi hwako, ndapota taura nesu kuti uwane zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko
Checheche Chekuita Chiitiko Gym Natural Beech Wooden Edu ...
Baby Teething mhete Teether Toy Wholesale ...
Teething Chain chewable nechishongo nokuda nendumure | ...
Silicone Teething mhete Baby Chew Toys Manuf ...
teething nechishongo mwana musikana, rwokuzvarwa teething, silicone teething marozari , silicone mwana teether , silicone teether , teether yakanakisisa 4 wemwedzi ,